Mayelana NATHI - Hangzhou Mingjue Technology Co., Ltd.
I-Flatbed Laser Cutting Machine
Laser umsiki Engraver
IKhabhinethi Laser Ukumaka Machine
Ihlukaniswe laser wokugubha umshini
ikhava egcwele laser wokugubha umshini
umshini wokumaka we-laser ophathekayo
I-Hangzhou Mingjue Technology Co., Ltd.
I-Hangzhou Mingjue Technology Co., Ltd.yinkampani yokuhlanganiswa kwezezimboni nezohwebo eyakhiwe ngo-2016. Sisebenza ndawonye nama-manufactories amathathu aphezulu ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme emhlabeni. Selokhu inkampani yamiswa, sisebenze kanzima ukuba ngumholi embonini yokuqopha i-laser, ukusika nokumaka. Singabantu abasha. Singabaxazululi bezinkinga. Sizibophezele ukuklama nokuhlinzeka ngezinhlelo ezisezingeni eliphakeme kakhulu ze-laser emhlabeni.
I-Hangzhou Mingjue Technology CO., LTD igxile ku-R & D, ukukhiqizwa nokumaketha kwe-CO2 laser eqopha nokusika umshini, umshini we-galvanometer laser, umshini wokusika we-fiber laser nomshini wokumaka we-laser. Ulayini womkhiqizo uhlanganisa amamodeli angaphezu kwe-100.
Izicelo zifaka ukuphrinta kwedijithali, izindwangu, okokugqoka, izicathulo zesikhumba, izindwangu zezimboni, ukufaka impahla, ukukhangisa, ukuphrinta ilebula nokupakisha, izinto zikagesi, ifenisha, umhlobiso, ukucubungula izinsimbi nezinye izimboni eziningi. Imikhiqizo eminingi nobuchwepheshe buthole amalungelo obunikazi kazwelonke nama-copyright, futhi banokuvunyelwa kwe-CE ne-FDA.
Isevisi ye-1.Professional ngesikhathi senqubo yonke yoku-oda, amahora angama-24 ayimela imibuzo yakho.
Ulayini womkhiqizo we-2.Full
Asikho isidingo sokuhlunga izimboni eziningi ukuthola izinhlobo ezahlukene zemikhiqizo oyifunayo, bese ubuza umuntu ohlukile ezinkampanini ezahlukahlukene. Ungathola konke lapha bese uxhumane nomuntu oyedwa nje ukuthola okufunayo.
Izinqubo zokuhlolwa kwekhwalithi eqinile, isilinganiso sokuhlolwa esingu-100% ngaphambi kokuthunyelwa.
Okuhlangenwe nakho okungaphezu kweminyaka eyi-12 embonini yokuhweba yamazwe omhlaba, nikeza ukuphawula okunguchwepheshe kuwe hhayi kwimikhiqizo kuphela kepha nakuyo yonke inqubo yoku-oda kusuka ku-A kuye ku-Z, njengezindaba zamasiko, ukuthunyelwa, izindaba zentela njalonjalo.
1. Izingxenye ezenziwe ngomshini zekhwalithi ze-CNC zokuqina okuqinisekisiwe
2. Ibhodi yokulawula ethuthukisiwe yokulungiswa kwemali okunembe kakhudlwana
3. Isiphephetha-moya esinamandla sentuthu nentuthu yomusi
4. Imbobo ye-USB ukuxhuma umqophi
5. I-Windows 8, 7 (64 noma 32 bit), XP, 2000 iyahambisana (AYISEBENZISI uhlelo lwe-iOS)
6. I-FDA eqinisekisiwe
Vumela okwengeziwe okwenziwe eChina kwaziwe emhlabeni.
Yenza abalingani bethu benze ibhizinisi kalula.